ILa Temperance (2015), inoveli yesithathu kaMaría Dueñas. | Izincwadi Zamanje
I-La Templanza (2015) inoveli yombhali waseSpain uMaría Dueñas. Uthathwa "njengombhali osephuzile", njengoba aqala umsebenzi wakhe wokubhala eneminyaka engaphezu kwengu-40. Ukuqala kwakho, Isikhathi esiphakathi kwemikhumbi (2009) wathengisa izigidi zamakhophi futhi wahumushelwa kwezinye izilimi ezingamashumi amathathu. Ngokungenakugwenywa, yonke imisebenzi yakhe yakamuva ifaniswe neyokuqala kwakhe.
Kulabo babhali inhloso yabo ukuthuthukisa imisebenzi yesikhathi eside - incwadi engaphezu kweyodwa - lokhu kungaba yinkinga. Kodwa-ke, ukuthola incwadi yokuqala ethengiswa kakhulu kumele ukuthula kwengqondo kwezezimali okwaziswa kakhulu. Kusho ukuthi "ukwazi ukuphila ngokubhala" (nangekhwalithi enhle yempilo). Ngakho-ke, inselelo yangempela ku-Dueñas namuhla ukuzedlula yena.
1 Mayelana nomlobi: María Dueñas
1.1 Ukuqashelwa kokuqala
1.2 Amadodakazi kaKaputeni
1.3 Izindaba zokwanelisa abalandeli?
2 I-Temperance: Mexico, Havana, Jerez de la Frontera
2.1 Iqhinga: indaba yokunqoba ... nokunqoba
3 Ukuhlaziywa nokubuyekezwa komsebenzi
3.1 Izinhlamvu "ezinye"
3.2 Uhambo lwezinzwa lweLa Temperance
3.3 Ubumnene, inoveli ku- "slow motion"?
Mayelana nomlobi: María Dueñas
U-Dueñas wazalwa ngo-1964 ePuertollano, idolobha eliseCastilla-La Mancha, esifundeni esimaphakathi seSpain. UnguDokotela we-English Philosophy, waphothula e-University of Murcia, lapho enguprofesa ogcwele e-Faculty of Letters. Eqinisweni, kube nesikhathi esincane esichithwe ekilasini selokhu kwangena ezweni lokushicilela.
Manje, bekungafanele abhale njalo kuphela, kufanele futhi abe khona futhi avele ezingqungqutheleni zabezindaba, imibukiso yezincwadi, asayine ama-autographs ... Ngo-2009 yaqala ukudayiswa Isikhathi esiphakathi kwemikhumbi, inoveli yomlando eyabekwa ngesikhathi seMpi Yombango yaseSpain. Igcwele imininingwane yangempela neprose ebambe ngokushesha abafundi abakhuluma iSpanishi.
U-Dueñas ukwazile ukugcina isitayela sakhe esicashile futhi esibucayi kwizilimi eziningi "ze-rustic" ezifana nesiJalimane noma isiNgisi. Isikhathi esiphakathi kwemikhumbi Kwakuwukuqashelwa kokuqala kwirekhodi lakhe elincane njengomlobi. Ngo-2010, kwamzuzela uMklomelo Wedolobha LaseCagagena Wezinoveli Zomlando. Kamuva, wathola i-Culture Award yoMphakathi waseMadrid, esigabeni Sezincwadi, ngonyaka we-2011.
Inoveli yakhe yesibili nayo yabeka umugqa phezulu kakhulu, Might Khohlwa (2012), yize bekungomunye othengisa kakhulu, kudumaze iningi labafundi bayo. Abafundi kuphela abangazange bazi kuqala ukuzidela kukaSira Quiroga (protagonist wenoveli yokuqala) abagcina benelisekile ngale ndaba. Ukuvuka okushiywe ngumthungi wezingubo osemncane okuphoqeleke ukuba ashiye iMadrid ngaphambi kwempi kunamandla amakhulu.
Ngo-2018 ifinyelele ezitolo ezidayisa izincwadi Amadodakazi kaKaputeni. Kwabagxeki kwakusho ukubuyisana okusobala kokugcina kuka-Dueñas no "fandom" wakhe. Inqubo eqale eminyakeni emithathu ngaphambili nge Isiphepho. Zombili lezi zincwadi zimelela isibonelo esicacile sesimo sokufuna ukwazi ezweni lanamuhla lezincwadi.
Luhlobo lwe "uhlelo lwenkanyezi”, Yikuphi okwabelana ngokufana okukhulu neHollywood ne-cinema yayo. Noma kwamanje kakhulu, kweNetflix nochungechunge lwayo. Abalandeli abathukuthele nabadumele yonke indawo, ngezikhalazo ezihlala njalo ezinkundleni zokuxhumana (ikakhulukazi kuFacebook) nakuzinkundla zewebhu.
Izindaba zokwanelisa abalandeli?
Impumelelo esheshayo ayimangazi uma ibuye ibe yesikhashana. Lokhu akunjalo ngoMaría Dueñas. AbaseSpain bathole indawo yabo phakathi kwababhali bezwe elibhapathizwe umkhakha othile njenge "noveli yesimanje." Ngakho-ke, noma kunjalo Isikhathi esiphakathi kwemikhumbi uyaqhubeka njengomsebenzi wakhe omkhulu, akayena umbhali wencwadi eyodwa.
I-La Templanza: EMexico, eHavana, eJerez de la Frontera
Ungathenga incwadi lapha: I-La Templanza
Izikhathi ezintathu ezihlukaniswe ngokusobala. Izifunda ezintathu ngokusobala azifani, kepha eziningi zazo zifana ngaphezu kolimi olwabiwe. Ezikhathini zokuqala zezindaba ezithintekayo zenoveli zivela ekuqaleni: uthando, ukukhaphela, inhlekelele nokuhaha. Kepha ngemuva kokuthuthuka izahluko ezimbalwa endabeni, ukujula kwesakhiwo kuyabonakala.
Lokhu okungenhla kwenzeka kakhulu ngenxa yokwakhiwa okwenziwa ngabakwa-Dueñas bezinhlamvu zabo: ntathu, kuyashintsha (futhi engalindelekile, ekugcineni). Ngezendlalelo ezimbalwa ezifakiwe noma ezisuswe ngokuya ngezimo, kude nokucatshangelwa kweManichean. Konke ukufingqa abalingiswa bayo ngegama elilodwa: abantu.
Iqhinga: indaba yokunqoba ... nokunqoba
Phezulu (ngaphandle kwanoma iyiphi inhloso yokweqa ekusetshenzisweni kwaleli gama), yindaba yendoda ekhuthele, ekhuthele futhi enesifiso sokuvelela, uMauro Larrea: ophoqelelwa hhayi kanye kuphela, kodwa kabili ukunqoba ubunzima obukhulu kakhulu. "Inzalo yothando" ibonakala ngaphansi kwegama elithi Soledad Montalvo. Owesifazane uzivumelanise ne-protagonist ngokuthi "owokugcina esicathulweni."
Uyakwazi ukusho zonke izinyathelo zendlela futhi alindele ukuhamba okulandelayo. Kuphakathi kwalaba balingisi ababili - okungumlingiswa ovelele - ukungezwani okugqugquzela iningi lendaba kuyakhishwa. Amanani afana nokuzimisela nokwethembeka avivinywa kaninginingi. Ukuqina kungaphezu komqondo nje wokuqhathanisa.
Ukuhlaziywa nokubuyekezwa komsebenzi
Izindawo zingama-protagonists. Izingwadule abavukuzi abasenyakatho neMexico ngesikhathi sikaMengameli uBenito Juárez. I-La Habana, ocebile futhi ngokungazi wawenqaba noma yimuphi umqondo ohlobene nokufuna ukuzimela noma ukuqeda ubugqila. Jerez, elinye lamadolobha ambalwa asinda ekuphepheni kwezomnotho okwenzeka ngekhulu le-XNUMX eSpain ngenxa yokulahlekelwa cishe kwawo wonke amakoloni alo aseMelika.
Laba abanye abalingiswa abathatha izinhlangothi ngaphakathi I-La Templanza. UMaría Dueñas, njengoba ekhulisa iprozi yakhe ehamba kancane futhi ebucayi, ayikho imininingwane egciniwe yokuchaza lezi zifunda ezintathu. Kubhekisisa nezikhathi zomlando ezenzeka kuyona ngayinye.
Uhambo lwezinzwa luka I-La Templanza
Izethameli zizizwela ngokwazo ukuthambekela nokunethezeka izakhamuzi zakhona ezihlupheka noma ezikuthokozelayo. Ngaphezu kohambo olubukwayo, ukufaneleka okuhle kweMaría Dueñas ku I-La Templanza bekulokhu kuvusa kumfundi uhambo olucacile lomsindo, olumnandi nolunamandla.
I-La Templanza, Inoveli ku- "slow motion"?
Ubumnene yindaba enezinto ezenzeka kancane. Kuze kube seqophelweni lokuthi abanye abafundi babe nesithukuthezi futhi baphelelwe yithemba, bazimisele ukuyishiya le ndaba phakathi nesiwombe sokuqala. Kepha lapho abalingiswa baso beya eCaribbean (kuqala) ukuwela i-Atlantic futhi (ngokuhamba kwesikhathi), leli cebo lizuza ijubane lokukhululeka kuze kube sekupheleni.
Ukubekezela okuncane akulimazi ukujabulela iprozi ye-Dueñas njengoba kufanele. Yakhelwe ukunakekelwa ngokuthula. Ngaphandle kokwaneliseka okusheshayo okukhuthazwa kusuka kuzingxenyekazi ezifana ne-Twitter noma i-Instagram. Udinga ukuthatha isikhathi esanele ukuze ukujabulele. Ngemuva kwakho konke, njengoba uJulio Cortázar asho, "inoveli ihlala iwina ngamaphuzu" ...
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » I-Novela » I-La Templanza